Shacabku waxa ay aaminsan yihiin in Al-shabaab ay dadka waalan u adeegsadaan ismiidaaminta | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Shacabku waxa ay aaminsan yihiin in Al-shabaab ay dadka waalan u adeegsadaan ismiidaaminta
Madaxii hore ee sirdoonka Maleeshiyada Al-shabaab Sakariye Ismaaciil Xersi, ayaa ka hadlay sababaha ay Maleeshiyadu bisha barakeysan u beegsaneyso shacabka Soomaaliyeed iyo Qaraxyada ay u adeegsaneyso carruurta yar yar.
Waxa uu sheegay in inta badan dhalinyarada u dagaalanta Kooxda ay yihiin kuwa laga indha xiro xaqiiqda islamarkaana laga dhaadhiciyo in fulinta dilalka iyo isqarxinta ay tahay qeyb kamid ah cibaadada bisha ramadaan.
Wuxuu tilmaamay in dhamaan dhalinyarada ku jirta kooxda ay aaminsan yihiin fakirka ah inay ku cibaadeysanayaan daadinta dhiiga bani’aadamka xiliyada suunka, waxa uuna taasi bedelkeeda sheegay in Hogaamiyayaasha kooxdu ay xooga saaran sida dhalinyarada loogu beeri lahaa fakirka weeraro iyo fulinta dilalka oo ay aaminsan yihiin inay alle ugu dhawaanayaan.
“Ujeedka bisha barakeysan ay Kooxdu xooga u saareyso dagaalada, fulinta dilalka iyo Qaraxyada waa mid goor hore lagu sii beero dhalinyarada si ay bisha ramadaan u geystaan falalkaasi, kaliya sababtuna waa inay carqaladeeyaan amaanka taas ayaa ugu weyn’’
Waxa uu sidoo kale ka hadlay dhalinyarada fuliya falalka isqarxinta sida looga dhaadhiciyo, maadaama ay adag tahay in qof nool oo soo taagan uu isqarxiyo, isaga oo miir qab ah.
‘’ Qofka wuxuu leeyahay Iqtiyaar cid ku qasbeyso inuu is qarxiyo ma jirto, kaliya waxa ay sameeyaan qofka ayay maskaxda ka qabsadaan waxaa laga dhaadhiciyaa in haduu ismiidaamiyo uu Janada galaayo taas ayaa sabab u ah inuu falkaasi fuliyo’’.
Waxa uu intaa hadalkiisa ku daray in dadku badanaa ay aaminsan yihiin in Al-shabaab ay adeegsadaan dadka madaxa loogu jiro, hayeeshee waxa uu tilmaamay in arrinka uusan sidaa aheyn balse dhalinyarada falka fulineyso ay yihiin kuwa caafimaad qaba oo la dhacsan fulinta weerarka.
Inta badan Maleeshiyada Alshabaab ayaa Qaraxyada iyo dilalka u adeegsada dhalinyaro marka la eego aan laheyn cilmi diini ah oo ay ku maamulaan maskaxdooda, markii laga reebo qoraal indha sarcaad ah oo ay u xariiqaan Culimada ay aaminsan yihiin.
Haddalka Ismail ayaa imaanaya iyadoo inta badan shacabka Soomaaliyeed ay aad uga cabsi qabaan weeraro ay Maleeshiyadu ku hanjabeen inay ka fulinayaan xarumaha Dowlada iyo goobaha ay ku kulmaan shacabka Soomaaliyeed.